3DWeather, codsi xiiso leh oo lagu arko cimilada Mac | Waxaan ka socdaa mac
3DWeather, codsi xiiso leh oo lagu arko cimilada Mac
Maalmo ka hor ayaa 3DWeather app ilaa nooca 2.1 Maantana waxaan rabnaa inaan dhammaantiin idinla wadaagno waxtarrada codsigan oo noo sheegaya cimilada iyadoo loo marayo isdhexgal runti wanaagsan iyo faahfaahin aad u wanaagsan. Runtu waxay tahay marka lagu daro cimilada, 3DWeather waxay noo ogolaaneysaa inaan xakameyno animations-ka 3D ee ka muuqda desktop markaan furaneyno barnaamijka iyo faahfaahinta cimilada markay da'ayaan ama markay qoraxdu jirto, runti waa xiiso badan .
Codsiga wuxuu ina tusayaa widget dusha desktop-ka in aan gabi ahaanba wax ka beddeli karno goobaha codsiyada, laakiin ma aha oo keliya xulashooyinka lagu dhigayo darajooyinka Celsius iyo astaamaha kala duwan haddii roob da'o, waa qorax ama waxaan leenahay ceeryaamo, dalabku wuxuu xitaa noo oggolaanayaa inaan wax ka beddelno hufnaanta qalabka oo beddel mawduuca gebi ahaanba si ay ula jaanqaado baahideena maaddaama ay leedahay ilaa 21 mawduuc oo leh deegaanno kala duwan.
Hawlaha kale, 3DWeather waxay na siisaa macluumaad ku saabsan:
Qorrax dhaca iyo cusboonaysiinta qorax dhaca is waafaji daqiiqada ugu dambeysa
Saadaasha hawada maalinlaha ah ee 36-ka saac ee soo socda
Saadaasha hawada maalin walba 4ta maalmood ee soo socota
Codsiga waxaan ka helnaa laba ikhtiyaar, mid mushaar leh oo leh shaqooyinkan kor lagu sharaxay iyo nooca bilaashka ah taasi waxay na siisaa "cunto fudud" yar oo ka mid ah waxa dalabku na siin karo guud ahaan. Si buuxda loogu taliyay kuwa jecel inay arkaan waqtiga oo ay raacaan isbeddelkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » 3DWeather, codsi xiiso leh oo lagu arko cimilada Mac